Maxay la macno tahay markaad ku riyooto masaska? Xaqiiqooyinka
Bogga ugu weyn Maxay ka dhigan tahay markaad ku riyoonayso Masaska? Xaqiiqooyinka
Sawirka Isha: Shutterstock
Abeesadu waa mid ka mid ah makhluuqa dilaaga ah uguna gurguurta badan adduunka. Inta badan haweenka uurka ku jira ee dhaqamada kala duwan kala duwan ayaa ka cabsada marka ay ku riyoodaan masaska. Qaar kale waxay leeyihiin hal ama laba caqiido oo ku xiran riyooyinka gaar ahaan marka lagu xiro masaska muddadan.
Mas riyooyinku ma calaamad baa mise maaha xilliga uurka? Mise waa riyo caadi ah cabsi darteed? Hadda ma ku riyooto mas marka aad uurka leedahay? Ma waxay kaa dhigaysaa inaad ka xun tahay uurka ka dib?
Maxay ka dhigan tahay in masaska lagu dilo riyooyin xilliga uurka? Riyada ku saabsan masaska xilliga uurka ma wax si dhab ah loo qaato mise maaha? Waan ogahay inaan xaq u leenahay, markaas aan ogaano.
Waa maxay Riyada Maska?
Riyada abeesada waa riyo ka mid ah xamaaratada inta badan masaska iyo laga yaabee cabsi ama xiiso leh. Riyada noocaan ah waxaa laga yaabaa inay leedahay macno gaar ahaan xilliga uurka ee haweenka.
Haddii aad aragto riyooyin soo noqnoqda ee masaska xilliga uurka, markaa waxay calaamad u noqon kartaa waxyaabo badan sida ay fahmeen fikradaha dhaqameed ee kala duwan. Qaar waxay ka fikiraan masaska si ay u soo dejiyaan gariirada laf dhabarta.
Waxaan marar badan aad u xiisaynnay inaan fahanno macnaha ka dambeeya riyo cad, gaar ahaan haddii ay marar badan dhacdo. Fikradaha qaarkood waxay sidoo kale u arkaan qaab nasiib wacan iyo nimco weligeed ah.
Haddaba, markaan baarnay riyooyinka abeesada, aan hoos u eegno waxa ay ka dhigan tahay fikradaha dhaqanka qaarkood.
Aragtida Sigmund Freud:
Sigmund Freud, aasaasaha cilmi-nafsiga, ayaa eegaya aragtidiisa ku saabsan riyooyinka masska isagoo ku nuuxnuuxsaday in riyada abeesadu ay ku xiran tahay jinsigayaga.
Waxa uu ku tilmaamay abeesadu inay tahay 'calaamadaha afka qalaad' ee ku xidhan tirooyinka labka ah ee nolosha qofka. Sida laga soo xigtay Freud, riyada ku saabsan masaska waxay muujin kartaa tafsiir galmo.
Waxaa lagu fasiraa xubinta taranka ee labka iyo qaab ay u soo jiidatay labka nolosha dumarka.
Qoraalkan, sida haweeney uur leh oo leh dareen xiriir dhow ama la qabsiga ninkaaga, waa macquul inaad ku riyooto mas sababtoo ah waxay kaa caawin kartaa yaraynta diiqada waxayna horseedi kartaa fulinta rabitaanka galmada.
Diimaha qaarkood sida Islaamka iyo Masiixiyadda ayaa laga yaabaa inay u arkaan mas ku riyoonaya xilliga uurka inay calaamad u tahay nasiib xumo ama weerar cadowgu ku hayo ilmahaaga uurka ku jira.
Tusaale ahaan, diinta Islaamku waxay ku doodaysaa xadiis uu leeyahay Ibnu Siriin oo fasiray in; Riyada mas ka soo baxa gurigaaga waxay u horseedi kartaa burbur nolosha.
Diinta masiixiga sidoo kale waxay aaminsantahay in ay tahay omen xilliga uurka maadaama ay astaan ​​u tahay abeesada sida bilowgii wakhtiga ee Aadan iyo Xaawo.
Haddii aad khibrad u leedahay, markaa waa muhiim inaad disho mas kasta oo aad ku riyootay sida ugu dhakhsaha badan. Labada diimoodba waxay aaminsan yihiin calaamadda xun ee xilliga uurka sida shar.
Dhaqanka iyo caadooyinka Hindida, riyooyinka ku saabsan masaska xilliga uurka waxay ka dhigan tahay waxyaabo badan oo laga yaabo inay noqdaan kuwo wanaagsan iyo kuwo xun. Sida ay sheegtay Care Guru, “Abeesadu waa makhluuqa ugu dahsoon ee adduunka oo dhan, waxayna xitaa meel gaar ah ku leeyihiin diinta Hindiya, dhaqanka iyo khuraafaadka.
Waxaa jira macnayaal kala duwan, gaar ahaan haweenka uurka leh. Inteena badan ma rumaysno calaamadda, laakiin ku riyada masaska xilliga uurka waa calaamadaha kor ku xusan.
Waxay sidoo kale hayaan fariinta qarsoodiga ah ama digniinta ku saabsan dhacdooyinka suurtagalka ah ee saameyn kara uurkaaga si togan ama si xun.
Waxaa kale oo ay ku doodaa mas kala duwan oo ay ula jeedaan;
"Riyo ku saabsan a Mas cagaaran ee riyada - Haddii haweeney uur leh ay ku riyooto abeeso cagaaran habeenkii, waxay muujinaysaa in uurjiifka uurka ku jira uu yeelan doono horumar caafimaad leh mustaqbalka. Abeesada cagaaran waxay sabab u tahay in lagu farxo 9ka bilood.
Mas cas ee riyada - Mas guduudan ee riyada waxaa badanaa loo arkaa nasiib naagta uurka leh. Tani sidoo kale waa calaamad muujinaysa in qof u dhow naagta sida asxaabta ama xubnaha qoyska la guursan doono ama la guursan doono maalmaha soo socda. Tani waxay la socotaa farxadda nolosheeda maadaama ay u dabaaldegi doonto oo ay ku raaxaysan doonto bilaha soo socda waxayna caafimaad ahaan doontaa inta ay uurka leedahay”.
Hindidu waxay caan ku yihiin dhaqamada iyo dhaqamada ay gaadhaan heerkooda sare; riyada abeesadu waligeed dhib kuma aha dumarka uurka leh marka laga eego aragtida dhaqameed ee hindiya maadaama ay qayb ka tahay waxa iyaga ka dhiga.
Waxaan baari karnaa fikradda dhaqanka Afrikaanka ee ku saabsan riyada masaska xilliga uurka ee bulshada Nigeria. Dalka Nigeria, riyooyinka abeesadu waxay ka dhigan tahay weerar xun oo lagu hayo haweeney uur leh taasoo inta badan la macno ah inay waayi karto uurkeeda.
Dadka reer Nigeria waxay aaminsan yihiin inay ka timid weerar ruuxi ah oo ay geysteen dadka ka hinaasay, xanaaqsan ama xitaa ka niyad jabsan uurka. Riyada masaska xilliga uurka waxay astaan ​​​​u tahay muujinta shaydaanka ee nolosha ilmaha uurka ku jira iyo hooyadiis.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in diimaha waaweyn ee ka taliya ciidda Nayjeeriya ie, Masiixiyadda iyo Islaamka ay si weyn u saameeyeen aragtidan.
Dadka reer Nigeria, haddii ay tahay riyo ah in la dilo mas, markaa waxaa loo tixraacaa riyo wanaagsan sababtoo ah waxay muujinaysaa inaad ka adkaatay cadawga aan wanaag kuu rabin.
Riyada masaska xilliga uurka waxay noqon kartaa mid niyad jab leh, marka loo eego dhaqamada qaarkood, waxayna sidoo kale ka soo jiidan kartaa aragtida dhaqamada kale ama dadka kale.
Si kastaba ha ahaatee, muhiimada ugu weyn ee fikradaha dhaqameed ee ku saabsan riyada masaska xilliga uurka ayaa hore loo daboolay.
Insofar ayaa sheegay in riyooyinka ku saabsan masaska xilliga uurka aysan u qalmin walwalka. Waa inaysan weligeed dhibaato noqon ama kordhin cadaadiska dhiigga haweenka uurka leh. Jawaabaheena su'aalaha kore waxay ku jiraan caqiidadayada iyo fikradaha la yaqaan ee masska.
Su'aaluhu waa kuwo shakhsiyadeed oo ka badan aragti guud. Riyada ku saabsan masaska ma wanaagsana mana xuma, waxaynu qeexnaa waxa aynu ka qabno. Su'aasha muhiimka ah ee la is waydiin doono waxay noqon doontaa, masku wuxuu ku riyoonayaa wax wanaagsan mise mid xun?
25 Suuqgeeyayaal Shabakad Lacageed Ugu Saraysa | Shirkadaha ugu Fiican
Maalgelinta Muddada Gaaban ee ugu Fiican
Barnaamijka Chime SpotMe 2022: Sida uu u Shaqeeyo | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Iyada oo saamaynta masiibada ay wali muujineyso madaxeeda, dadku waxay dhawaanahan sahaminayeen xulashooyinka xorriyadda maaliyadeed,…
Sida Looga Baxo Qandaraaska Taleefanka Gacanta Adigoon Bixin | 7 Tallaabooyin
Marna ma ahayn wax fudud in lagu boodo heshiiska qandaraaska taleefankaaga, laakiin waad burin kartaa heshiiska haddii aad…
Fikradaha Daryeelka Nafsiga ee 30 ee aan la Fidin 2022
Ku noolaanshaha qaab nololeed caafimaad qaba maaha oo kaliya waxa aad saxankaaga ku hayso ama waxa aad ku qabato...